Vaovao - Miorena tsara amin'ny tanjonao ary manohiza mamporisika.
Ny fivoriana famintinana fanao isan-taona nataon'i Yu Rucheng tamin'ny taona 2021 dia natao hanomezam-boninahitra. Teo ambany fitarihan'ny talen'ny jeneraly Andriamatoa Liu Jianjun, dia tonga niaraka tamin'ny nofinofisin'izy ireo ny sangany amin'ny departemanta marketing, mamintina ny tsy fisian'ny asa amin'ny tapany voalohan'ny taona, ary manomana ny fomba hahatratrarana ny tanjona amin'ny tapany faharoa ny taona, ary mandray anjara amin'ny "trano" an'i Yu Rucheng, ary ataovy izay hahatanteraka ny nofy. Ataovy maivana kokoa ny fototra.
Tany am-piandohan'ny fivoriana, Li Sixian, talen'ny departemantan'ny varotra anatiny, ary Yang Wen, talen'ny departemanta marketing any ivelany, dia namintina ny zava-bitan'ny asa sy nanangona traikefa tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2021, ary nametraka ny fifantohana sy ny làlan'ny asa ao ny tapany faharoa amin'ny taona. Taorian'izay dia nandray ny dingana ihany koa ireo sangany ao amin'ny departemantan'ny marketing mba hamintina sy hanao tatitra momba ny asany.
Minoa, mivoaha, ary ny angovo miabo no teny lakilen'ny fivoriana fanao isan-taona. Nandritra ny fivoriana dia nanamafy ny fahatokianay izahay tamin'ny fanatanterahana ny tanjonay tamin'ny alàlan'ny horonan-tsary roa. Fantatray ihany koa ny lahasa manandanja amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny departemantan'ny marketing an'i Yu Rucheng amin'ny alàlan'ny tantaran'ny mpandraharaha sy ny fikasan'ny filoha jeneraly Liu Jianjun.
Ny tolakandro, ho valin'ny olana noresahin'ireo sangany tao amin'ny tsena, ny mpanampy ny talen'ny jeneraly dia nitarika ny tsirairay hanao hetsika kisarisary niara-namorona ekipa niara-namorona. Ny tsirairay dia nizara ho vondrona hifampidinika samirery. Taorian'ny adihevitra efatra sy fifampidinihana efatra dia namintina ny valin'ny dinika niarahan'ny tsirairay sy ny fankatoavany ho vahaolana amin'ny olana. Amin'ity dingana ity, ny tsirairay dia nirotsaka an-tsehatra, nifandona tsy an-kijanona, indraindray nifamaly mafy, indraindray nihatokatoka ho fankasitrahana, ary tamin'ny farany dia nahazo marimaritra iraisana, ary niara-niaina ny hakanton'ny fahendren'ny ekipa sy ny famoronana izy ireo.
Tamin'ny faran'ny fivoriana dia namarana ny kabariny Andriamatoa Liu: "Ny 2021 dia mihoatra ny antsasany, ary ny tanjontsika amin'ny tapany faharoa amin'ny taona dia sarotra sy feno fanamby. Mino aho fa samy afaka mijanona amin'ny andraikiny manokana ny tsirairay, mahatratra ireo zava-bita farany amin'ny varotra, mijanona ho mahatanteraka ny fikasany tany am-boalohany, ary mandroso! ” Amin'ny teny, ny teny sy ny fehezanteny rehetra dia manentana ny fanahy ny mpiasa rehetra tonga. Mino tanteraka izahay fa amin'ny ambin'ny taona 2021, ny sampan-draharahan'ny varotra an'i Yurucheng dia hahazo vokatra tsara kokoa.